Xabsi lagu xukumay laamane silciyey Gabar ay u arkeen in ay tahay qumayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xabsi lagu xukumay laamane silciyey Gabar ay u arkeen in ay tahay qumayo
La daabacay tisdag 4 juni 2013 kl 13.17
Maanta maxkamada Borås ayaa soo saartey go'aan xukun oo ay ku ridey nin iyo haweeney dacwad loogu soo oogay in ay silciyeen cunug yar oo ay u arkeen in uu yahay qumay ama saaxirooley.
Labada ruux ayaa xukun xabsi lagu riday. Ninka ayaa lagu xukumay 2 sanno oo xarig ah kadib markii lagu helay danbi ah garaacis ba'aan oo caruureed, qasab sharci daro ah iyo hanjabaad sharci daro. Haweeneyda ayaa dhankeeda ayana lagu xukumay 8 bilood oo xabsiya kadib markii ay maxkmada ku heshay danbi ah hanjabaad sharci daro ah.
Xadgudubka waxaa ilmaha loo geystey intii u dhaxeysey sannadkii 2007-2008, markaas oo gabadhan aheyd 10 sanno jir. Dhaibaatada gabadha loogeyto ayaa soo shaac baxdey xilli danbe oo ay hayadda bulshada i Borås gabadha reerkaada kalo wareegtey.
Maxkada Borås ayaa waxay qoralka xukunada ay ridey ku sheegey in qaar kamid ah falalka gabdha loogeystey ay ahaayeen meel ka dhac taas oo ay maxkamda ay ku darsatey qiimeynta cinqaabta ay maxkmada gaartey. Waxyaabaha gabadha lagula kacay waxaa kamid ah in lagu qasbay in ay cabto dhacaano aan habooneyn, waxaana kamid ah in lagu qasbay in ay cabto kaadideeda.